Willian oo si jees jees ah kaga hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ka tagayo kooxda Chelsea – Gool FM
Willian oo si jees jees ah kaga hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ka tagayo kooxda Chelsea
Dajiye January 13, 2019
(Chelsea) 13 Jan 2019. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea Willian ayaa si jees jees ah kaga hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ka tagayo magaalada London suuqan Janaayo.
Willian ayaa lala xiriirinayaa kooxda Barcelona suuqan bisha Janaayo, iyadoo ay kooxda reer Catalonia soo bandhigtay dalab gaarsiisn $ 50 million iyo da’ayarka reer Brazil ee Malcom.
Laakiin xidiga khadka dhexe reer Brazil ayaa kadib guushii ay ka gaareen kooxda Newcastle United wuxuu xaqiijiyay in mustaqbalkiisa uu wali dhex yaalo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Blues.
Willian ayaa kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay wuxuu shabakada PT Sport kala hadlay wararka lala xiriirinayo kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Mustaqbalkeyga waa Chelsea, ma garanayo waxa aad ka hadleysaan”.
Intaas kadib Maurizio Sarri ayaa wuxuu dhankiisu sheegay: “Willian aad ayuu muhiim inoogu yahay, waa ciyaaryahan fiican, waxaana qabaa inuu nala sii joogi doono”.
“Waxaana qabaa inuu soo bandhigi karo waxa ugu fiican, sababtoo ah awoodiisa waa heer sare, laakiin aad ayuu muhiim inoogu yahay, sidaasi darteed waxaan qabaa inayan macquul ahayn inaan waayi doono bisha Janaayo”.
HORDHAC: Real Betis v Real Madrid
Gennaro Gattuso oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan wararka lala xiriirinayo Higuaín kooxda Chelsea